Maamulka Jubaland iyo Kenya oo ka wada hadlay arrimaha xuduudka – XOGMAAL.COM
Maamulka Jubaland iyo Kenya oo ka wada hadlay arrimaha xuduudka
By Soomaaliya	 On May 15, 2019
Dowladda Kenya ayaa dooratay in Darbiga Beledxaawo iyo Mandheera ay kala hadasho maamulka Jubaland halkii ay kala xaajoon lahayd dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Saraakiil ka mid ah Milatariga Kenya ee aan ku jirin AMISOM ayaa waxaa ay kulan magaalada Ceelwaaq kula qaateen Odayaasha iyo saraakiisha Maamulka Jubaland si ay ugala hadlaan darbiga ay dumiyeen dadka reer Beledxaawo.
Arrintan ayaa loo arkaa in Kenya ay ku muujineyso saameynteeda dhinaca Maamulka Jubaland,waxaana jira tallaabooyin kale oo gurracan kuwaas oo ay Kenya qaadday inkasta oo dowladda Somaliya aysan wali bixin jawaab rasmi ah.
Kenya ayaa go’aansatay in ay toos ula xaajooto dowlad Goboleedyada,waxaa ay duullimaadyadii Muqdisho iyo Nairobi u wareejisay Wajeer, Bishii February waxaa ay ceyrisay danjirihii Soomaaliya,waxaa ay marti gelisay shirkii mucaaridka ee ka dhacay Nairobi,kuwaas oo ay horay u diidday.
Waxa ugu badan ee dowladda Kenya ku kallifaya galaangalka intaas la eg ayaa ah in dowladda Soomaaliya ay diidday in muranka badda ee u dhaxeeya labada dal lagu xalliyo meel aan maxkamadda ahayn.
Qorshaha howlgal ka dhan Shabaab ayay billaabayaan Ciidanka Soomaaliya iyo AMISOM
Wasaaradda Dekadaha Iyo Dekadda Muqdish ayuu Kormeeray RW Ku-xigeenka+Sawirro